Puntland oo furtay shir dastuurka ku saabsan - Sabahionline.com
Puntland oo furtay shir dastuurka ku saabsan Abriil 16, 2012
Shir soconaya afar beri oo ay ka qaybgalaaan 480 ergay oo u codaynaysa dastuurka la soo bandhigay ayaa wuxuu Axaddii (15-ka April) ka furmay Puntland, Garowe Online ataa werisay. Qodobbo la xiriira
Puntland oo ansixisay dastuur cusub
Madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed “Faroole,” saraakiil sarsare, hoggaamiyeyaalka qabaa’ilka, iyo marti-sharaf shisheeye ayaa ka soo qaybgalay furitaankii shirka. Maxamed Xasan Barre oo ah guddoomiyaha Guddiga Dastuurka Puntland ayaa dadka isu soo baxay u sheegay in hannaanka xulashada ee ergooyinku uu ahaa mid “caddaalad ah oo loo wada dhamaa’. Codayn loo qaado dastuurka la soo bandhigay ayaa dhici doonta dhamadka shirweynaha. "Dastuurkani wuxuu dhawrayaa xuquuqda aadamiga, xornimada hadalka waxaanu aqbalayaa kaalinta ay soo kordhiyaan madaxda dhaqanka iyo dumarkaba,” ayuu yiri Nuur Maxamed Nuur oo ah guddoomiyaha Dalladda Puntland ee Ururada Bulshada Rayidka ak. "Dastuurkani aad buu muhiim ugu yahay si ay dadkeennu midnimadooda u adkaystaan,” ayuu yiri Suldaan Saciid Cabdisalaam, garaadka beesha Warsangeliga. Muxuu kula yahay qoraalkan?